အိုမီဂါ Lime ခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်း အိုမီဂါ Lime ကို HelpMeHemp - HelpMEHemp
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ အိုမီဂါ Lime ခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်း
အိုမီဂါ Lime ခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်း
HelpMEHemp's® Whipped Lime Body Butter သည်သင့်အသားအရေကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေပြီးသင်လတ်ဆတ်သောထုံးကျောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်စားရန်လုံလောက်သောအနံ့ကိုခံစားရလိမ့်မည်။ Lime တွင် Vitamin C ပါ ၀ င်ပြီးအရေပြား၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့်တက်ကြွမှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောအခမဲ့အစွန်းရောက်များကိုတိုက်ထုတ်သည့်အားကောင်းသော antioxidant ပါဝင်သည်။ HelpMEHemp's® ကြာပွတ်ထုံးခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်း ဒါကြောင့်လည်းပါဝင်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို။ ပင်မှော်ဖြစ်ပါတယ် HelpMEHemp's® လက်မှတ် Hemp Seed နှင့် Argan Oils ။
HelpMEHemp's® Whipped Lime Body Butter ၏သက်တောင့်သက်သာရှိသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောရနံ့သည်အနှိပ်ခံခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကဲ့သို့ဆက်ဆံပါနှစ်သိမ့်ခြင်း၊ လန်းဆန်းစေခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများကိုခံစားရရန်အတွက်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြွယ် ၀ ပြီးသဘာ ၀ ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုချက်ချင်းသက်သာစေသည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: Chia, ထုံး, အော်ဂဲနစ်လျှော်ရေနံ, ရေရှည်တည်တံ့ Argan
အရွယ် 4oz အပြာရောင်အိုးတလုံး 8oz ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Mason အိုးတလုံး 8oz
ငါဓာတ်ပုံမတိုင်မီကောင်းသောရှိခဲ့အလိုရှိ၏, ဒါပေမယ့်ဒီလုပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏သားသည်အသက် ၆ နှစ်အရွယ် မှစ၍ atopic အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးလောင်ကျွမ်းစေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်။ သူသည်ယခုအသက် ၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ရာ၎င်းကိုသူကိုယ်တိုင်အသုံးချနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူပျံ့နှံ့နိုင်သည်၊
ဤ Lime butter သည်သင်၏အရေပြားပေါ်ရှိခြောက်သွေ့သောအညစ်အကြေးများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအစိုဓာတ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အပြင်အခြားအရေပြားအဖုအပိမ့်များအတွက်လည်းကောင်းမွန်သည်။ ကြိုက်တယ်။
ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာထုံးခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်ကိုအသုံးပြု။ ခဲ့ကြပြီးငါလုံးဝချစ်ကြတယ်! အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကိုခေါက်။ နေလောင်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ အနံ့ကမင်းကိုစားချင်စေတာပဲ! ဒါကငါသုံးတဲ့ငါ့အ ၀ တ်အစားအပေါင်ပစ္စည်းပဲ။ ပတ်ပတ်လည်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းပစ္စယ!
အနံ့ကတော့အံ့သြစရာပါ။ ဤထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်နေထိုင်သောနေရာခြောက်သွေ့သောလေထဲတွင်ကျွန်ုပ်၏အသားအရေကိုနုပျိုစေသည်။ ငါဒီကုမ္ပဏီကိုချစ်တယ် :)
Omega ထုံးကိုယ်ထည်ထောပတ်ကိုလုံးဝချစ်မြတ်နိုးပါ။ moisturizer (မျက်နှာနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ) မှအနှီးအဖုများအထိအရာရာတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
ဒီပစ္စည်းကိုနေလောင်ဒဏ်အတွက်ပထမဆုံးဝယ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်ငါ့လက်မောင်းကကွေးနေတဲ့coversရိယာတစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော့်လက်ကအဖုအထစ်ဖြစ်သွားတယ်။ HelpMeHemp ကို အသုံးပြု၍ တစ်ပါတ်အကြာတွင်ပျောက်သွားပြီဆိုတာကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ ငါသည်ဤထုတ်ကုန်ကိုချစ်ပြီးယုံကြည်! ဒါဟာအစယားယံပယ်ရှား !!!
ဘယ်ကစရမလဲမသိဘူး HelpMEHemp ကမ်းလှမ်းသမျှအရာအားလုံးကိုငါစွဲလမ်းနေတယ်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်နေ့စဉ်ထုံးတမ်းစဉ်လာထုံးကိုယ်ခန္ဓာထောပတ်၊ အာဂန်ရေနံ၊ လျှော်ဆီနှင့်ဖော့စ်အခွံများကိုထည့်ပြီးကျွန်ုပ်နှင့်အတူစူးစူးစိုက်စိုက်စလုပ်နေသောအခြားထုတ်ကုန်အချို့ကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။ အားလုံးမယုံနိုင်စရာပဲ ကိုယ်ခန္ဓာထောပတ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင်အစဉ်မပြတ်ငါစိုပြည်မှုနှင့်အထောက်အကူအများဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ psoriasis ပျောက်ကွယ်သွားစေပြီးမာဂရီးတာ (hehe) ကဲ့သို့အနည်းငယ်အနံ့ခံစေသည်။ Argan ရေနံသည်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာပေါ်ရှိခြောက်သွေ့သောအသားအရေကိုကူညီပေးပြီးကျွန်တော့်ကိုတောက်ပစေသည့်အပြင်အချိန်ကြာရှည်စွာထက်ဆံပင်များကိုပိုမိုကျန်းမာစေပါသည်။ ငါနံနက်ယံ၌ဖျော်ရည်အဖြစ်လျှော်မျိုးစေ့နှင့်လျှော်ရေနံကိုစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးနေ့တိုင်းစတင်စဉ်ကျွန်ုပ်အားအပြည့်အဝ၊ လန်းဆန်းစေပြီးအပြုသဘောဆောင်ခြင်းကိုအမြဲခံစားစေသည်။ ငါကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခါမှမ။ Keri နှင့် HelpMEHemp ရှိရှိသူတိုင်းကိုဖြည့်ရန်အံ့သြစရာကောင်းပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သူတို့၏ဖောက်သည်များကိုအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်သည်။ Keri သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်ထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းအားကျွန်ုပ်အားအများဆုံးအထောက်အကူပြုရန်နည်းလမ်းတိုင်းကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်လုပ်သမျှအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ခွဲစိတ်ကုသမှု 10/30/19 ။ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကထောပတ်နဲ့အတူငါ့အမာရွတ်ကကောင်းကောင်းကုန်တယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်
အခုတော့နွေးထွေးသောဒေါက်ဖိနပ်ငါ့ခင်ပွန်းများ psoriasis နှင့်ခြောက်သွေ့သောအက်ကွဲဒေါက်ဖိနပ်များအတွက်အလုပ်လုပ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာ သဘာဝထုတ်ကုန်အားလုံးအံ့သြစရာကောင်းပြီးထန်းရနံ့ကိုငါပြန်ဝယ်ယူမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Glowing ဤထုတ်ကုန်ကိုသုံးပြီးငါ့အရေပြားတောက်လောင်နေသောကြောင့်ငါ၏အရေးအကြောင်းများပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ၎င်းသည်အရေပြားမီးထွန်းရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းတွင်အာဂန်နှင့်လျှော်ရေနံရှိသည်ကိုချစ်ပါ။ ကျိန်းသေနောက်တဖန်ဝယ်ယူလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် HelpMEHemp!
နှင်းခူဒီထုံးခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ငါ့သမီးအမြဲပြင်းထန်သောနှင်းခူရောဂါခံစားခဲ့ရသည်။ သူမကိုကူညီသည့်ထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ လိမ်းဆေးနှင့်လိမ်းဆေးအများစုသည်အလွန်ချောမောသည်ဟုမကြာခဏသူမညည်းညူသည်။ Body Body Butter သည်သူမ၏အသားအရေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ သူမသည်သူမကိုချစ်ပြီးငါလိုက်နာသောအခါတွင်လုံးဝမကျေမနပ်ဖြစ်နေသည်။ ၎င်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးအရေပြားအတွင်းသို့ကောင်းမွန်စွာစုပ်ယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထုတ်ကုန်ကိုနှစ်သက်သည်။ ဒါဟာအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ရနံ့အရသာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်ဤပစ္စည်းကိုတစ်ပါတ်သာပိုင်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လိုင်းများလျှော့ချရန်စွမ်းရည်ကိုမပြောနိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်အနံ့ရှိပြီးသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ ငါ့အရေထဲသို့စုပ်ယူ ငါ့မှာခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေတွေအထူးသဖြင့်ငါ့လက်တွေကအလုပ်မှာသူတို့ကိုအမြဲတမ်းဆေးကြောနေလို့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Help Me Hemp ထံမှကုန်ပစ္စည်းများထပ်မံဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။
You ROCK Lime 1. Lime ထောပတ်သည်သင်၏ခြေဖဝါးတွင်အထူးကောင်းမွန်သည်။ အထူးသဖြင့်မြင်းများကိုလေ့ကျင့်ပြီးနောက်တစ်နေ့လုံးထိုင်ခုံကိုခေါက်။ လိုင်းထောပတ်ပေါ်တွင်တင်ထားသဖြင့်ခဲများအားလုံးနီးပါးသည်ကျွန်ုပ်ဆေးညွှန်းနှင့်စမ်းသပ်မှုသုံးခုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ the-counter အစိုဓာတ်ကိုငါကြိုးစားခဲ့ဘာမျှဤမျှလောက်ကြီးစွာသောရလဒ်များကိုပေးတော်မူပြီ! ထုံးထောပတ်ကျောက်ဆောင် !!!!!! ၂။ အသက် ၅ နှစ်အရွယ်ရှိသူ Lime မပါဘဲအိပ်ရာဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ သားဖြစ်သူအထူးကုဆရာဝန်များထံသွားဆရာ ၀ န်အထူးကုများထံမှသူသည်ပြင်းထန်သောဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သော်လည်းထုံးကျောက်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းများမရှိဘဲအရေပြားကိုချောမွေ့စွာဖယ်ထုတ်ပေးသောဓာတုပစ္စည်းများမရှိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် rash!
ကျွန်ုပ်၏“ Lime” ကိုလိုအပ်သည်။ ၂။ ၅ နှစ်အရွယ်သူ၏“ Lime” မပါဘဲအိပ်ရာဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ သားသည်အထူးကုဆရာ ၀ န်အထူးကုဆရာဝန်များအားသူပေးသောအရာများသည်ကြမ်းတမ်းသောဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သော်လည်းထုံးကျောက်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းများချောမွေ့စွာပါဝင်သည်။ သူ၏အသားအရေနှင့်အဖုကွာတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒါအရမ်းကောင်း !! ဒီထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်ပါတယ် ပါဝင်ပစ္စည်းများကနေအနံ့နှင့်အရာကအရာအားလုံးအရာအားလုံး! ဒီဟာကအော်ဂဲနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါနှစ်သက်တယ် ငါဘိနပ်မပါသောဖြစ်ခြင်းကနေဆိုးဆိုးဝါးဝါးအက်ပြီ။ ငါ့ခြေထောက်တွေကိုကူညီဖို့ဒီထုတ်ကုန်ကိုစသုံးပြီးငါကိုချစ်နေပြီ။
အားလုံးအချစ်ဆုံးအချစ်နှင့်အချစ်! ဒီမှာ Omega Lime Butter ဟာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပါ။ အံ့သြစရာပဲ! ၎င်းသည်အရေပြားရောဂါများစွာကိုကုသပေးသည်။ သင့်အသားအရေသည်အကြီးဆုံးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖြစ်သည် - ဤအထူးပေါင်းစပ်မှုသည်သဘာဝလမ်းဖြင့်အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းနှင့်ကာကွယ်ပေးခြင်း! သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတကယ်လက်ဆောင်ပေးသည် !!!
အံ့သြစရာငါဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထောပတ်ကိုလုံးဝသဘောကျတယ်။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်ပေါ်အဆိုးဆုံးခြောက်သွေ့သောအက်ကြောင်းရှိသည်။ ငါဟာအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုလို့ဆိုကြတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုငါ့ခြေထောက်ပေါ်တင်ပြီးအသုံးပြုခဲ့တယ်။ တစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီ - ငါ့ခြေကိုသုံးပြီးတစ်ပတ်အတွင်းပျောက်သွားတယ်။ ငါကအဖြစ်ကောင်းစွာက၏အနံ့နှင့် texture ကိုချစ်! အံ့သြစရာပဲ!
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအနံ့သည်သင်၏စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းအတွက်အမှန်တကယ်ကူညီပေးသည်။ ခံစားချက်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ မလုံလောက်ဘူး
လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် !! ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထောပတ်ကိုလုံးဝစွဲလမ်းတယ် !!!! ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်အနံ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်၏အရေပြားကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သမျှအရာအားလုံးထက်ပိုမိုနူးညံ့စေသည်။ ငါဒီကို ၂ လကြာအောင်ညဥ့်မုန့်အဖြစ်သုံးပြီးငါ့အသားအရေကအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိတာထက်ပိုကြည့်ကောင်းတယ် !!
ဤ Lime ခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်ပါသည်။ ငါ့အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဒါဟာအံ့သြကြီးမြတ်အနံ့ !!! ငါညအချိန်၌ပင်ငါ့မျက်နှာကိုပင်အသုံးပြုသည်ပြီးပြည့်စုံသောအသားအရေ iluminator !!! ၎င်းသည်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုးပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်း ၀ တ်ဆင်သည်ကိုနှစ်သက်ပြီးလတ်ဆတ်သောသန့်ရှင်းသောအနံ့ထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
ငါ့အသားအရေဟာဖဲကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ထုံးကိုယ်ထည်ထောပတ်ကိုငါအလွန်ချစ်မြတ်နိုးသည်၊ အသားအရေသည်ဖဲနှင့်တူသည်။ ငါသည်လည်းငါ့ဆံပင်တွင်အာဂွန်ဆီကိုသုံးနေပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင်ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်သည်ကျန်းမာပုံရသည့်ခြားနားချက်ကိုပြောပြပါရစေ။
အမေဇုံ American Express Bitcoin Dogecoin Ethereum Litecoin Mastercard PayPal က Venmo ဗီဇာ